Kenya oo Sheegtay in ey ka quusatay Qabsashada Magaalo Xeebeedka Kismaayo - iftineducation.com
Kenya oo Sheegtay in ey ka quusatay Qabsashada Magaalo Xeebeedka Kismaayo
aadan21 / January 16, 2012
Dowladda Kenya ayaa shaaca ka qaadday inaysan qorshaha ugu jirin weerar ay hadda ku qaado magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada hoose illaa ay taageero kaga hesho beesha caalamka.
Wasiirka gaashaandhigga ee dalka Kenya Yuusuf Xaaji ayaa u sheegay wargeyska The East Afrikan in howlgalka ay mileteriga dalkiisu ka wadaan Soomaaliya uu horseeday in adduunyada looga baahdo inay gacan ka geysato xasilloonida Soomaaliya, isagoo sheegay in Kenya aysan ku talo jirin dagaal ay ku qaado Kismaayo illaa laga helo dhaqaalle iyo taageero dheeraad ah.
Mr. Xaaji ayaa tilmaamay in go’aanka sida laga yeelayo magaalada Kismaayo ay u taallo beesha caalamka, wuxuuna beeniyay in hadafka ciidamada Kenya uu yahay inay qabsadaan magaaladaas, balse uu xusay in ujeedkooda uu ahaa in maleeshiyada al-Shabaab laga fogeeyo xudduudaha Kenya.
Wasiirka gaashaandhigga ayaa waxa uu muujiyay in Kenya lagu qasbay inay Soomaaliya gasho iyadoo difaacaysa dalkeeda, laakiin aysan u socon inay dhul la wareegto ama ay ka taliso.
Mileteriga Kenya ayaa Soomaaliya galay bishii October ee sanadkii hore 2011-ka si ay ula dagaallamaan kooxda al-Shabaab oo Kenya ay ku eedeysay inay ka dambeeyeen afduubyo waddankeeda ka dhacay.
Qodobo Romantic Ah Oo Ay Haweenka Jecel Yihiin Balse Ragga Iska Indha-Tiraan
Ragga laga xiiseeyo wadamada Yurub.. ma taqaanaa??